अन्त्येष्टि गर्न लागिएकाे शिशु चलमलाएपछि ‍‍…. – Health Post Nepal
२०७६ साउन २६ गते १७:००
परिवारबाट मृत्यु भएको ठहर गर्दै अन्त्येष्टिका लागि चिहानमा पुर्याइएका एक नवजात शिशुको चितवन मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको छ । देवघाटमा अन्त्येष्टि गर्न लगिएका शिशु चलमलाएपछि परिवारले अस्पताल पुर्याएको हो । ज्यादै कम तौलका साथ जुम्ल्याहा जन्मिएको शिशुको पछिल्लो स्वास्थ्यअवस्था मध्यम रहेको अस्पतालले जनाएको छ ।
पश्चिम चितवनको चनौलीकी एक महिलाले बिहीबार चितवन मेडिकल कलेजमा जुम्ल्याहा शिशुलाई जन्म दिएकी थिइन् । समय नपुगी ७ महिनामै जन्मिएका जुम्ल्याहा शिशुको तौल निकै कम थियो । १ किलो २०० ग्राम तौलका शिशुलाई अस्पतालले मृत घोषणा गरेको थियो भने अर्का जम्मा ८ सय ५० ग्रामका शिशुको पनि लामो समय उपचार गर्नुपर्ने जानकारी अस्पतालले दिएपछि परिवारले उनलाई घर लिएर गएका थिए । घर लगेपछि शिशुको मृत्यु भएको ठानेर परिवारले उनलाई अन्त्येष्टिका लागि देवघाट पुर्याएको थियो ।
‘शिशुको स्वास्थ्यअवस्था क्रिटिकल छैन, तर समस्या भने छ,’ डा. लम्सालले भने, ‘महिना नपुगी जन्मिएको र ज्यादै कम तौल भएकाले शिशुलाई नर्मल बनाउन निकै समय लाग्न सक्छ ।’
तर, अन्त्येष्टिका लागि खाल्डोमा राख्नेक्रममा बच्चा चलमलाएपछि परिवारले उनलाई अस्पताल पुर्याइएको थियो । हाल शिशुको उपचार भइरहेको र भेन्टिलेटरको आवश्यकता नभएको अस्पतालका निर्देशक डा. दयाराम लम्सालले जानकारी दिए । ‘शिशुको स्वास्थ्यअवस्था क्रिटिकल छैन, तर समस्या भने छ,’ डा. लम्सालले भने, ‘महिना नपुगी जन्मिएको र ज्यादै कम तौल भएकाले शिशुलाई नर्मल बनाउन निकै समय लाग्न सक्छ ।’
अन्त्येष्टिका लगिएको शिशु जीवित पाइएपछि प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको छ । घटना शंकास्पद देखिएपछि प्रहरीले शिशुका आफन्तलाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ । अनुसन्धानका लागि शिशुका बुबा, फुपूलगायत ४ व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएको जनाइए पनि उनीहरुको नाम भने खुलाइएको छैन । प्रहरीले अस्पतालले मृत घोषणा गरेका जुम्ल्याहामध्येका अर्का शिशुलाई अन्त्येष्टि गरिएको ठाउँबाट उत्खनन गरेर परीक्षणका लागि पठाएको बताइएको छ ।